बैशाख एक गते आत्मह त्या गर्दै पुन्यगौतम ! हेर्नुहोस पुण्य गौतमको यो भिडियो – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/बैशाख एक गते आत्मह त्या गर्दै पुन्यगौतम ! हेर्नुहोस पुण्य गौतमको यो भिडियो
बैशाख एक गते आत्मह त्या गर्दै पुन्यगौतम ! भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा रहेको छ ।यो पनि समाचार पढ्नुहोस, चितुवासँग ल डेर छोरीको उ द्धार
काठमाडौँ, ५ चैत । तनहुँकी एक महिला चितुवाको आ क्रमणमा परेकी आफ्नी छोरीलाई खोसेर उद्धार गर्न सफल भएकी छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–३, बनकेवाकी इन्दिरा न्यौपानेले सोमबार साँझ घरमै खेलिरहेकी छोरीलाई आ क्रमण गरी घि सारेर ५० मिटर तल पु¥याएको चितुवासँग ल डेर छोरीलाई बचाएको हो ।घरको आँगनमा रहेको धारामा आमासँग हात समातेर पुगेकी २१ महिनाकी संस्कृति न्यौपानेलाई चितुवाले आ क्रमण गरी लगेको थियो । छोरीलाई चितुवाले तानेर लगेसँगै होहल्ला गर्दै आमाले चितुवासँग लडेर छोरी बचाएको हो ।
घ टनास्थलको अध्ययन गर्न पुग्नुभएका डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख केदार बरालले घरदेखि ५० मिटर तल बालिकालाई लगेको अवस्थामा आमाले चितुवाबाट बालिकालाई खोस्न सफल भएको बताए । “आमा ड राएर चितुवाको पिछा नगरेको भए बालिकाको ज्या न जाने अवस्था थियो । आमाले आफ्नो ज्या नको जोखिम मोलेरै भए पनि बालिकाको उ द्धार गरेको पायौँ”, बरालले बताए । चितुवाको आ क्रमणबाट घाइते बालिकाको पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका नगरप्रमुख किसान गुरुङले जानकारी दिएका छन् । गुरुङले चितुवाको आ क्रमणबाट घाइते बालिका खतरामुक्त रहेको र आमा सामान्य घाइते रहेको बताए । तनहुँमा दुई वर्षको अवधिमा चितुवाको आ क्रमणबाट नौ जनाको मृ त्यु भइसकेको छ । (गोरखापत्र दैनिकबाट)बैशाख एक गते आत्मह त्या गर्दै पुन्यगौतम ! हेर्नुहोस पुण्य गौतमको यो भिडियो
सहयोगको आश देखाएर विदेशबाट फोन गरी तनाब दिने को हो ? दृष्टिविहिन गायिका मनिषाले पाइन सहयोग (भिडियो हेर्नुस्)